I-US NAVY: Ukusela Amanzi eHawaii ukuba atyhefwe ngamafutha?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » I-US NAVY: Ukusela Amanzi eHawaii ukuba atyhefwe ngamafutha?
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Red Hill Bulk Fuel Storage Facility kwiSiqithi sase-Oahu, esaziwa njenge-Navy Red Hill iziko lakhiwa ekuqaleni kwe-1940 ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Yenziwe ngamatanki amakhulu angaphantsi komhlaba angama-20, kunye nothungelwano lwemibhobho ehambisa amafutha kwiZibuko iPearl, phakathi kwezinye iindawo.
Ngaba le ndawo iza kuvuza amafutha kumanzi okusela kwesi siqithi?
I-US Navy kunye ne-State of Hawaii banengxaki.
Umbhexeshi uxelele iSebe lezeMpilo laseHawaii ngoSeptemba ukuba amagosa oMkhosi wamanzi anike ubungqina bobuxoki kwaye abamba ulwazi malunga nokubola kwiziko layo le-Red Hill e-Oahu.
Ngokutsho kwengxelo kwi-Civil Beat, i-media esekelwe eHawaii inokuba nengxaki ngokubonelela ngamanzi okusela acocekileyo e-Honolulu.
Umhlwa unokubeka esi sakhiwo emngciphekweni wokuvuza amafutha kunikezelo lwamanzi esiqithini.
Ngenxa yolu lwazi, eli candelo licele uMlawuli wezeMpilo uLibby Char ukuba aphinde avule inkqubo yomthetho eza kunceda ekuqinisekiseni ikamva leli ziko labadala.
Isithethi somkhosi wamanzi sixelele eTurboNews akuzange kuvuze kwaye imeko izinzile ngeli xesha.
Ubhekiselele kwiphepha lewebhu le-US NAVY: https://cnic.navy.mil/regions/cnrh/om/red-hill-tank.html
Eli phepha liphantsi kwaye oku kuye kwavunywa, kodwa akukho ndlela yimbi enikwe yona.
Ukuvuza kwepetroli okuninzi kumashumi eminyaka ukusukela oko ukufakwa kwayo kubangele inkxalabo enkulu phakathi kwabahlali kunye nabathetheleli bezendalo aboyika ukuba amanzi okusela angaphantsi kweetanki anokuthi atyhefwe ngamafutha.
Oku kunokubeka ukhuseleko lwabahlali kunye neendwendwe kwisiphaluka sase-Honolulu emngciphekweni.
Ityala elichasayo laqaliswa emva kokuba i-Sierra Club yaseHawaii kunye neBhodi ye-Honolulu yonikezelo lwamanzi inkcase isicelo se-Navy sika-2019 semvume yokusebenza. Iingxoxo zabanjwa ekuqaleni kukaFebruwari kwaye zavulwa kwakhona ngoJulayi emva kokukhutshwa kwepetroli kumbhobho ogqabhukileyo kwelinye lamatonela angaphantsi komhlaba.
NgoSeptemba we-16, igosa lomkhosi wasemanzini elisebenza njengempempe lazisa i-DOH ye-Hazard Evaluation kunye ne-Emergency Response ofisi ukuba ubungqina obungachanekanga bungenisiwe, kwaye ulwazi olubalulekileyo lwalugcinwe ngokungafanelekanga nguMkhosi waManzi kwiinkqubo zetyala elikhuphisanayo.
Lo mbhexeshi waseNavy uye wadliwano-ndlebe yi-ofisi yeGqwetha Jikelele laseHawaii ngo-Okthobha, imemo yatsho.
Umntu wabika ukuba ubungakanani obupheleleyo besiseko senkqubo yokugcina itanki ephantsi komhlaba, kubandakanywa nemibhobho, ayizange ibhengezwe kurhulumente kwisicelo semvume ye-Navy, kwaye loo ngcaciso malunga nembali yokubola yayingabanjwanga ngokungafanelekanga, ngokutsho kwememo.
eTurboNews yafikelela kwiRhuluneli, uLt. Governor, nakusodolophu waseHonolulu ngaphandle kokufumana mpendulo.